दसैंको टिका लगाउन माइती आएकी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिईन तर घर नपुग्दै यस्तो खबर आएपछि कसरी पत्याउनु ? - Sampurnab Khabar
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार November 1, 2021 by सम्पूर्णव
काठमाडौं : ‘दसैंको टिका लगाउन असोज २९ गते माइती आएकी मेरी छोरी हाँस्दैहाँस्दै घर फर्केकी थिइन्। घर पुगेको केही घन्टा नबित्दै उसले आ,त्म ह,त्या गरी भन्दा कसरी पत्याउनु?’ मृतक अञ्जली गौतमका बाबु होम बहादुर गौतमले छोरीको मृ’त्यु शं,क्का’स्पद भएको भन्दै शं’का व्यक्त गरे। ‘उसलाई केही स’म’स्या भए त माइतमै बस्थी होला नी? आ,त्म ह,त्या नै गनुपर्ने केही विषय भएको भए हामीलाई सुनाउँदी हो। ज्वाईले दुख दिन्छ भनेर आमालाई भनेकी रहिछन्। परिवार नै मिलेर उसलाई मा,रेका हुन्।’ उनले भने।चौरी देउराली ३ काभ्रेकी १९ वर्षीय अञ्जली गौतमले एक वर्षअघि गाँउ नजिकैका २८ वर्षीय लक्ष्मण मोक्तानसँग अन्तर जातिय प्रेमविवाह गरेकी थिइन्। तर ट्याक्सीचालक लक्ष्मण र अञ्जलीबीच विहे गरेको ६ महिनादेखी नै झ,गडा सुरु भयो। श्रीमानले वा’स्ता गर्न छाडेको र पटकपटक आफ्नो घर जा भन्ने गरेको भन्दै उनी माइतमा सुनाउने गर्थिन्।विवाह गरेको १ वर्ष पनि बितेको थिएन। असोज ३० मा आफ्नै घरको कोठामा उनी मृ’त भेटि’इन्। उनका बुवाका अनुसार अञ्जलीको मृ’त शरिर उनकै कोठाको पलङमा लडिरहेको थियो। घाँ,टिमा सल बाँ’धिएको थियो। सल मिलाएर कैचीले का’टेजस्तो थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरीले घटनाको अनु’स’न्धानमा ला’प’रवाही गरेको भन्दै अञ्जलीका माइती पक्ष आन्दोलनमा छन्। ‘बुहारी मा’र्न पाँइदैन, ह,’त्या’रालाई कारवाही गर’ भन्दै उनीहरुले जिप्रका अघि नारावाजी गरिरहेका छन्।मृ’तक अञ्जलीका काका प्रेम गौतमका अनुसार प्रहरीले आ,’त्म ह,’त्या दुरुत्सा’हनको जा’हेरी दर्ता गर्न नमानेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हाे। प्रेम भन्छन्, ‘छोरीको शं,स्का’स्पद मृ’त्यु भएपछि हामीले आ,त्म’ह,त्या दुरु’त्साह’नको जाहेरी दर्ता गर्न पटकपटक कोशिस गर्यौं। तर प्रहरीले जाहेरी लिएन। हामीले मानव अधिकार तथा महिला आयोग पुगेर उजुरी दियौं। अनि मात्रै घ’ट’नाको १४ औं दिनमा जाहे’री दर्ता भएको छ।
‘माइती पक्ष नपुगी छोरी झु,ण्डिएको सल किन काटीयो? घ’ट’नास्थलमा हामीलाई जान, फोटो भिडियो खिच्न समेत दिइएन। प्रहरी नै मिलेर प्रमा’ण न’ष्ट गर्यो। हामीलाई ज्वाईमाथी शं’का छ। उसलाई प्र’क्रा’उ गरेर अ’नुस’न्धा’न अहिलेसम्म गरिएको छैन। अ’नु’सन्धा’नका न्युनतम प्रक्रियाहरु पनि पुरा गरिएन। छोरी मा,र्ने ज्वाई निस्फिक्री गाँउघर डुलिरहेको छ। हामीलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गर्न मिल्छ?’,उनले भने।
अञ्जलीका बुबा प्रेमका अनुसार लक्ष्मणले छोरी भगाएपछि उनीमाथि बालविवाहको मु’द्धा गर्न खोजेका थिए तर अञ्जलीले मेरो खुसिले विवाह गरेको हुँ भन्दै मु’द्धा गर्न दिइनन्। उनले भने,‘अञ्जलीले आफ्ना साथीलाई फोन गरेर खान लाउन नदिएको, लक्ष्मणले अरु केटी लिएर हिँड्ने गरेको तथा बच्चैमा बिहे गरेको भन्दै सुनाउने गर्थिन्।
माइत आउँदा पनि आमालाई सबैजनासँग कुरा गर्नु छ भन्थिन्। दसैंमा मिलेर बस्ने र पछि कुरा गर्छु भन्दै उनी आफ्नो घर गएकी थिइन्। तर एकाएक मृ’त्युको खबर आयो, उसलाई मा’रीएको हो। हैन भने भित्रबाट ढोका लक गरेको अवस्थामा ला,स किन भेटियो। सासुले सल का’टेको भन्छन्। सल काट्दा ला,श भुइमा बजारिनु पर्ने? सलक्क ओछ्यानमा कसरी पुग्यो?’, उनले भने।
माओवादीका स्थानीय नेतासमेत रहेका दुर्गा सिंह लामाको छोरा भएकै का’रण प्रह’रीले लक्ष्मणलाई जोगाउन ला’गीपरेको माइती पक्षको आ’रो’प छ। उनीहरु भन्छन्, मृ’त’कको मोवाइल बरामद गरिएको छ। तर घ’ट’नाको १६ दिन पुग्दा पनि लक खोल्न सकिएन भन्दै कुनै जानकारी दिएको छैन।
यस्तै आ’रोपी’त लक्ष्मणले प्रयोग गर्ने मोवाइल पनि बरा’मद नगरिएको, घ’ट’नाका सम्वन्धमा श्रीमान र सासुसँग कुनै वयान नलिएको माइती पक्षको आ’रो’प छ। अञ्जली गौतम मृ’त्यु प्रक’रणमा अन्नपुर्णपोष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी हरि खतीवडासँग जानकारी मागेको थियो। उनले घ’ट’नाका सम्बन्धमा अनु’स’न्धान भैरहेको र प्रमाण पुगेपछि आ’रो’पितलाई प्र’क्रा’उ गरीने जानकारी दिए।
पोष्टमार्टम रिर्पोट अहिलेसम्म नआएको बताउँदै खतिवडाले घ’ट’नाको अनुस’न्धा’न भैरहेकाले थप जानकारी दिन नमिल्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘यस्तो घ’ट’ना’मा अ’नुस’न्धान गर्न हामीलाई कानुनले २ वर्षसम्म समय दिएको छ। समयमै अ’नुस’न्धान सक्छौं।’अन्नपूर्णपोष्ट बाट
Prevमेरो जिन्दगी नै बर्बात भयो भन्दै श्रीमती धुरुधुरु रुइन मिडियामा आएर!केटा फरार(हेर्नुस भिडियो)
Nextआज कार्तिक १६ गते मंगलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल